Odroid N2: SBC kale oo ka wanaagsan kan Raspberry Pi | Qalabka bilaashka ah
HardKernel wuxuu leeyahay dhowr nooc oo ah Looxyada SBC Odroid aad u xiiso badan, laakiin mid ka mid ah moodooyinka ugu dambeeyay ee la bilaabay ayaa ahaa Odroid n2. Intaas waxaa sii dheer, ka mid ahaanshaha waxyaabaha ugu caansan ee loo yaqaan 'Raspberry Pi', waxaa jira inbadan oo mashruucyo ah oo si rasmi ah u siiya guddiga noocan ah, sidaas darteed waa faa'iido haddii aadan rabin inaad yeelato dhibaatooyin iswaafajin ah.
Qodobkaan waxaan isku dayi doonaa inaan wax walba kaaga sheego nidaamka deegaanka ee HardKernel uu abuuray iyo, gaar ahaan, diiradda saar guddiga Odroid N2. Waxaa jira waxyaabo aad u wanaagsan oo laga ogaan karo horumariyayaashan ...
1 Ku saabsan HardKernel
2 Noocyada Odroid
2.1 Alaabada kale ee ku habboon Odroid N2 iyo looxyo kale
3 Dhammaan wixii ku saabsan Odroid N2
3.1 Odroid N2 faahfaahinta farsamada
Ku saabsan HardKernel
HardKernel Co. Ltd. waa shirkad fadhigeedu yahay South Korea, taasina waxay caan ku noqotay wax soo saarkeeda calanka, taarikada Odroid. Magaceedu wuxuu ka yimid midowga Open + Android, in kasta oo qalabkeedu uusan hadda ahayn il furan, haddana qaar ka mid ah qaybaha naqshadeynta waxay leeyihiin macluumaad u furan qof walba.
Waa inaadan kugu hagin asalka astaanta Odroid, maxaa yeelay looguma talagalin oo keliya orod android. Qaar badan oo ka mid ah noocyadeeda ayaa awood u leh inay socodsiiyaan qaar badan oo ka mid ah qaybinta ugu caansan ee GNU / Linux, labadaba noocyadooda x86 iyo kuwa loogu talagalay ARM.
HardKernel wax weyn ayuu leeyahay taarikada kala duwan, wax run ahaantii muhiim ka dhigaya haddii aad raadineyso wax ka duwan. Sida Raspberry Pi, waxay ku egtahay iibinta Chips-ka ku saleysan ARM. Laakiin haddii aad raadinayso qaar kale oo ISA ah oo ku saabsan arrimaha binary software, markaa wax badan oo aad qabato ma lahaan doontid.
Bedelkii, android waxay ku siisaa dabacsanaan badan adeegsadayaasheeda macnaha ay ku kala dooranayaan naqshadaha kala duwan. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa kooxahan looxyada Odroid:
Iyada oo ku saleysan ARMDareenkan, waxaad ka heli kartaa looxyo ku shaqeeya Amlogic chips iyo sidoo kale Samsung Exynos chips, iyo sidoo kale qaar ka mid ah moodooyinka Rockchip qaaska ah.
Amlogic: Qeybtaan waxaa kamid ah Odroid C0, Odroid C1, Odroid C2 iyo Odroid N2.
Samsung: Waxaad ka heli kartaa moodello sida Odroid XU4 iyo XU4Q, Odroid HC1 iyo HC2, iyo Odroid MC1.
dhagax dhagax: Waxa kale oo jira dhinac kale sida 'Odroid GO' oo loogu talagalay in lagu abuuro kombiyuutarrada ciyaarta ee la qaadi karo.
X86 ku saleysan: Haddii aad doorbideyso naqshad dhismeed leh barnaamij ballaaran oo ballaaran, markaa waa inaad doorataa isla kan aad u isticmaasho kombuyuutarkaaga. Chips-yada Intel Celeron J4115 waxay ku jiraan looxyada 'Odroid H2 +'.
Alaabada kale ee ku habboon Odroid N2 iyo looxyo kale
Marka lagu daro qaar ka mid ah walxaha elektarooniga ah lagu sharaxay boggan loogu talagalay GPIO-yada golahan, sidoo kale HardKernel wuxuu leeyahay a qalab badan iyo waxyaabo dheeri ah looxyadaada, laga bilaabo sahayda korontada, ilaa shaashadaha LCD, kaararka xusuusta, kaamirooyinka, qalabka dhawaaqa, baytariyada, horumarka, isku xirayaasha, iyo waxyaabo kaloo badan.
Dabcan, maahan oo keliya inay jiraan wax beddelaadda Odroid ee Raspberry Pi, waxaa jira nolol intaas dhaafsiisan sidoo kale. Tusaale ahaan, waad awoodaa iibso taarikada sida:
Guddiga Ururka ASUS: oo leh Rockchip RK3288 QuadCore ARM SoC oo ah 1.8Ghz iyo Mali-T764 GPU, 2GB oo ah DDR3 DualChannel RAM, Ethernet, taageerada 4K, TinkerOS, iyo suurtagalnimada in lagu fuliyo mashaariic badan oo DIY ah.
Odroid XU4- Nooc kale oo xoog leh oo ah 'Odroid' oo leh 'Samsung Exynos 5422 chip' oo ku saleysan Cortex-A15 iyo Cortex-A7 OctaCore, Mali-T628 GPU, 2GB of LPDDR3, eMMC flash, USB 3.0, HDMI, Ethernet, iwm.
ROCKX NUMX: loox leh 64-bit Rockchip SoC, 4GB oo RAM ah, USB 3.0, taageero 4K, 128GB flash, iwm.
YouYeetoo Lenovo Leez P710: Gudiga SBC wuxuu si aad ah diirada u saaray barnaamijka 'IoT', oo leh processor xoog leh iyo GPU, 4GB oo RAM ah, 16GB oo flash flash ah, awooda isku xirnaanta oo muhiim ah, AOSP Android iyo taageerada Ubuntu Core, ...
Raspberry Pi 4 4GB Model B +: ugu jecel, noocii ugu dambeeyay ee gudigan SBC.
Dhammaan wixii ku saabsan Odroid N2
Dhammaan alaabooyinka HardKernel waa laga tagay Odroid n2, kuwa ugu xiisaha badan dhammaantood. Guddigan waa mid ka mid ah jiilkii ugu dambeeyay ee ka soo baxa warshadan waxaana la xoojiyay si loo siiyo waxqabad ka ballaaran kuwii ka horreeyay, iyadoo la adeegsanayo waxtarka tamarta wanaagsan iyo fursadaha waaweyn. Awood badan, ka dhakhso badan, ka xasilloon N1.
Dhamaantiin waad ku mahadsantihiin astaamaheeda qalabka, laga bilaabo SoC oo ay ku jiraan processor xoog leh oo ku saleysan weyn.LITTLE naqshadaha. Taasi waa, waxay isku dhafan tahay koox labo ARM Cortex-A53 CPU ah oo leh waxtarka tamarta iyo waxqabadka hoose iyo koox kale oo ka kooban laba ARM Cortex-A73 cores ee 1.8 Ghz oo leh waxqabad sare.
Waxa tan lagu gaadhayaa waa in la geliyo hal ama koox kale oo xuddun ah hawlgalka iyada oo ku xidhan waxqabadka loo baahan yahay daqiiqad kasta iyada oo ku xidhan culayska shaqada. Marka waad gaarsiin kartaa waxqabadka markaad ubaahantahay iyo isticmaalka hoose marka udubkooda ugu yar ay ku filan yihiin socodsiinta howlaha.
Intaa waxaa dheer, SoC waxay sidoo kale isku daraysaa jiil awood leh oo cusub Mali-G52 GPU markaa sawirada ku saleysan OpenGL wax weyn uma ahan guddigaan SBC-da yar. Dhammaan gunta lagu dhisay tikniyoolajiyada 12nm oo leh awood kuleylinta kuleylka iyo heatsink bir ah oo lagu daray heer ahaan kala qaadista kuleylka la abuuray.
Xusuus ayaa lagu daraa dhammaan waxyaabaha kor ku xusan Nooca DDR4 ee RAM u dhiganta 4GB. Dhammaan waxaas ayaa ka dhigaya waxqabadka inuu 20% ka boodo Odroid N1 ee multicore.
Sida for software, waxay maamuli kartaa nidaamyada hawlgalka GNU / Linux, markaa waxaad ka dooran kartaa qalabka aad jeceshahay ee ARM ee aad doorbido, Ubuntu, iyada oo loo marayo kuwa kale sida OpenSUSE, ilaa Arc Linux. Intaa waxaa dheer, sida aan kor ku soo sheegay, maadaama aaney aheyn guddi aad u qariib ah, waxaa jira dhowr nidaamyo hawlgal oo keena sawirro sidoo kale gaar u ah Odroid N2.
Dabcan sidoo kale waad sameyn kartaa orod android, laga bilaabo nooca 9 ilaa kuwa kale. Laakiin kiiskan, haddii shaashad taabasho la isticmaalo, markaa waxay ku egtahay 2K, halka fiidiyowgu uu noqon karo 4K.
Odroid N2 faahfaahinta farsamada
Soo koobidda iyo isku-ururinta dhammaan kuwa faahfaahinta farsamo, halkan waxaa ku yaal liiska qodobbada muhiimka ah:
SoC: Amlogic S922X Quad-Core 2x Cortex-A53 ee 1.9Ghz + 2x Cortex-A73 at 1.8Ghz. 64-bit ARMv8-A ARM ISA oo leh Neon iyo Crypto kordhin. Iyadoo Mali-G52 GPU oo leh 6 cutub oo dil ah 846 Mhz.
Memoria: 4GB oo ah RAM DDR4 PC4-21333. Kaydinta flash EMMC ilaa 128GB + microSD karti karti.
Red: Gigabit Ethernet LAN (RJ45) oo wata kaarka shabakadda Realtek RTL8211F, iyo adabtarada USB-ga ah ee ikhtiyaariga ah.
Xuduudaha kala duwan: HDMI 2.0, fiidiyow isku dhafan, codka codka, SPDIF indhaha, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG, 1 UART, 40 pin GPIO pin PWR, SPI, iwm.
Cuntada: DC jack 5.5mm oo leh isku xiraha 2.1mm wanaagsan. 7.5v-18V (illaa 20w), adabtarada 12V / 2A
Isticmaal: xaalad bilaa camal ah (IDLE) waxay ku isticmaashaa oo kaliya 1.8W qiyaastii., halka markay ugu badnaan waxqabadkeedu gaadho 5.5w, markii la damiyana (istaaga iftiinka) waxaa loo dhigaa 0.2w.
Foom Isir (cabbir): 90x90x17mm (SBC), 100x91mmx24 (heatsink ama heatsink)
Peso: 190 g oo leh heatsink
Qiimaha: 79 $
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » Odroid N2: SBC kale oo wanaagsan oo loo yaqaan 'Raspberry Pi'